VOA Burmese APK 5.4.1.5 für Android herunterladen – Die neueste Verion von VOA Burmese APK herunterladen - APKFab.com
v5.4.1.5 von VOA (Voice of America)
Über VOA Burmese
VOA Burmese (Paketname: com.audionowdigital.player.voaburmese) wird von VOA (Voice of America) entwickelt und die neueste Version von VOA Burmese 5.4.1.5 wurde am 27. Oktober 2021 aktualisiert. VOA Burmese liegt in der Kategorie von Nachrichten & Zeitschriften. Sie können alle Apps von dem Entwickler der VOA Burmese durchsuchen und 82 alternative Apps zu VOA Burmese auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 7.0+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
ဗွီအိုအေမှ ထုတ်လွှင့်သည့် သတင်း၊ သတင်းဆောင်းပါး၊ အပတ်စဉ်ကဏ္ဍ များကို အခမဲ့ မိုဘိုင်းအက်ပ်ဖြင့် ကြည့်ရှု နားဆင်နိုင်ပါသည်။ ဗွီအိုအေသည် ရုပ်သံ၊ ရေဒီယိုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ် နည်းလမ်းတို့ဖြင့် ထုတ်လွှင့် တင်ဆက် နေသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတခုဖြစ်ပါသည်။ အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာရှ ဒေသများအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝန်းတွင် သီတင်းပတ်စဉ် ကြည့်ရှု နားဆင်သူပေါင်း သန်း ၂၀၀ ကျော်ရှိပါသည်။ လွတ်လပ်သော သို့မဟုတ် ခိုင်မာသော သတင်းဌာနများ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ပြီး တားဆီးမှု ကင်းမဲ့သော အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးမရှိသည့် နိုင်ငံများ အတွက် အဓိကဦးတည်၍ သတင်းထောက်ပေါင်း
၃,၅၀၀ ကျော်ဖြင့် လည်ပတ် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ယခု မိုဘိုင်းအက်ပ်အသစ်တွင် -
* ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ အသံဖိုင်များ၊ စာသားများဖြင့် အဆင်ပြေစွာ ဖတ်ရှု နားဆင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
* နောက်ဆုံးရသတင်း တက်သည်နှင့် ချက်ခြင်းသိနိုင်ပါသည်။
* Podcast တွင် နှစ်သက်သည့်အချိန် နားဆင်နိုင်ပါသည်။
* အင်တာနက် ချိတ်မထားချိန်တွင် ဖတ်ရှု၊ ကြည့်ရှု၊ နားဆင်နိုင်ရန် သတင်းများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများကို ဒေါင်းလုတ်ထားနိုင်ပါသည်။
* အက်ပ်ကို မိမိအလိုရှိသလို သုံးနိုင်ရန် စီစဉ်လို့ရပါသည်။
* ဗွီဒီယိုများ၊ အသံဖိုင်များ ကြည့်ရှု နားဆင်နိုင်ပါသည်။
* နှစ်သက်ချိန်တွင် ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင် ရန် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး သိမ်းထားနိုင်ပါ သည်။
* Facebook ၊ Twitter ၊ အီးမေးလ်တို့ အပါအဝင် အခြား ဆိုရှယ်မီဒီယာများသို့ မျှဝေနိုင်ပါသည်။
* အင်တာနက်ပိတ်ပင်ထားလျှင် ကျော်ကြည့်နိုင်ရန် Psiphon နှင့် New Node တို့ကဲ့သို့ နည်းလမ်းများ တပါတည်း ထည့်သွင်းထားပါသည်။
VOA Burmese 5.4.1.5 Update
VOA Burmese Besonderheiten
VOA Burmese 5.4.1.5 APK
27. Oktober 2021 89.29 MB
VOA Burmese 5.4.1.2 APK
25. Oktober 2021 50.92 MB
VOA Burmese 4.5.2 APK
5. Juni 2021 42.97 MB
VOA Burmese 4.5.1 APK
7. April 2021 43.11 MB
Alternativen zu VOA Burmese Mehr
「無綫新聞TVB NEWS」流動應用程式正式使用，資訊最快最新 ，讓你時刻緊貼無綫新聞、掌握社會脈搏 !